Libia · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Libia · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Libia tamin'ny Febroary, 2011
Ady & Fifandirana28 Febroary 2011
Tahotra, korontana, tebiteby ary hakivina - nampiasaina hitantarana ny zava-manjaka ao an-tseranam-piaramanidin'ny renivohitra Libyana nandritra ny andro faramparany avokoa ireo voambolana ireo. Tafiditra anatin'ny tsy fahafantarana izay ho avy i Libya hatramin'ny nisian'ny fitroarana hikomy amin'ny mpitondra ity firenena iray ity, dia ny fikomiana amin'ny Kolonely Muammar Al Gaddafi ny...
Fanoherana27 Febroary 2011
Ady & Fifandirana26 Febroary 2011
Jordan: Voavaly ny fangatahana hamaly an'i Libia
Jordania25 Febroary 2011
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Fikomian'i Libia 2011 ity lahatsoratra ity. Nandritra ireo Fihetsiketsehina marobe niseho tany Tonizia ary avy eo tany Ejipta, nanao fihetsiketsehina tamim-pirahalahiana ireo Jordaniana, ary namoaka bilaogy maro sy tweet tsy voaisa intsony momba ireo hetsika ireo. Tsy niavaka tamin'ny modely ny fikomiana tany Libia; Namerina...
Eoropa Afovoany & Atsinanana25 Febroary 2011
Ady & Fifandirana24 Febroary 2011
Mety ho ora sisa no isaina amin'ny fitondran'i Muammar Al Gaddafi. Saingy rehefa nandrahona ny hamono ny mpanao fihetsiketsehana sy ny miaramila mihaika ny fitondrany izy dia mamparary an-doha ny ora sisa andrasana. Any amin'ny toerana tsy eo ambany fifehezan'i Gaddafi intsony dia efa manomboka manangona tahirin-kevitra momba ny fanitsakitsahana...
Amerika Avaratra24 Febroary 2011
Emirà Arabo Mitambatra24 Febroary 2011